Ukubuyekezwa kweChuwi Hi10 Plus ngekhibhodi yangaphandle | Izindaba zamagajethi
Ukubuyekezwa kweChuwi Hi10 Plus ngekhibhodi yangaphandle
UMiguel Gaton | | Android, Izibuyekezo, Windows
Uma emasontweni ambalwa edlule sikunikeze ukubuyekezwa kweChuwi Vi10 Plus, namuhla sekuyithuba likadadewabo omdala, I-Chuwi Hi10 Plus, ithebhulethi enikela ngaphezu kwezici ezithokozisayo futhi ezigqame ikakhulukazi ngeyayo I-boot ebili evumela ukuthi sisebenze kokubili uhlelo lokusebenza (i-Android) ne Windows 10.
Futhi kulo mcimbi siphinde sazama i- ikhibhodi yangaphandle yangempela ye-Chuwi Hi10 Plus (esebenza futhi kwi-Vi10), isesekeli esibalulekile uma ufuna ukusebenza nethebhulethi ukubhala imibhalo noma ukuthumela ama-imeyili ngendlela entofontofo nephumelelayo. Intengo yayo ingu- € 205 futhi Ungayithenga ngokuthengisa ngokuchofoza lapha.
1 I-Hi10 Plus, ngaphandle ifana ne-Vi10 Plus
3 Uhlelo olubili lokusebenza
4 Ikhibhodi yangaphandle, umngane ofanele
5 Ukuzimela okuhle kokusetshenziswa
8 Igalari yezithombe
I-Hi10 Plus, ngaphandle ifana ne-Vi10 Plus
Lokhu kubukeka kanjena ithebhulethi yeChuwi Hi10 Plus
Ngokubuka, iChuwi Hi10 iyafana nemodeli yangaphambilini. Ingabe i- design lihle kakhulu futhi nenhle, ngezinto zokwakha ezisezingeni eliphakeme ezinikeza ukuthinta okuhle kokusetshenziswa nokunikeza isici esivumayo esijwayelekile kudivayisi.
Shayela a Isikrini esingu-10,8 intshi ngefomethi engu-3: 2 nokuxazululwa okuphelele kwe-HD (1920 x 1080), okuhlinzeka ngokucacile konke esingakulindela kusuka kudivayisi kule banga. Ngezansi inokuxhumeka kukazibuthe kwekhibhodi yangaphandle, ngakho-ke ukuyixhuma nokuyinqamula kulula kakhulu futhi kukhululekile ukukwenza.
I-Los izipikha zitholakala ezinhlangothini yethebhulethi, into engenzekanga kumodeli yeChuwi Hi8 futhi ngokungangabazeki intuthuko ebalulekile ngoba ivumela ukuthola umsindo wekhwalithi ongcono lapho idivayisi ilele ngaphezulu. Lokhu kuyinto ehambisana neqembu lonke, ngoba ngenkathi iHi8 yayihloselwe ukusetshenziswa njengethebhulethi kuphela, I-Hi10 yenzelwe ukusetshenziswa njenge-laptopNgakho-ke kungenzeka ukusebenzisa i-Remix OS futhi Windows 10 izinhlelo ezisebenzayo.
Ngaphakathi, ithebhulethi iza neprosesa Intel Cherry Trail Z8300 I-64bit Quad Core ku-1.44GHz futhi I-4 GB ye-RAM, okuthile okubaluleke ngokuphelele ukuthola Windows 10 ukuhamba kancane futhi usivumele ukuthi siyisebenzise njenge-laptop ukusebenzisa iposi, ukubhala amadokhumende, ... kepha lawo awanamandla okwanele ukuhlela izithombe noma ukudlala imidlalo yakamuva ukubeka izibonelo ezimbili ezidinga ukusebenza okuphezulu.
Uma usebenzisa ithebhulethi ene-Remix OS uzobona ukuthi isebenza ngokusobala kakhulu, futhi kungukuthi ngaphandle kokungabaza inguqulo yethebhulethi ye-Android ilula kakhulu kunesistimu yokusebenza ye-Microsoft.
Uhlelo olubili lokusebenza
Njengoba sesivele siphawule, i UChuwi Hi10 unohlelo olubili lwe-boot lokho kusivumela ukuthi sikhethe ngokushesha lapho sivula ithebhulethi uma sifuna ukusebenzisana nayo Windows 10 noma nge-Remix OS. Kuleso sikrini sokuqala sinemizuzwana eyi-10 yokukhetha uhlelo olusebenzayo, ngaphandle kwalokho okuzomakwa ngokuzenzakalela kuzoqalwa, yize ngokuhamba kwesikhathi singasuka kusistimu yokusebenza siye kolunye ngendlela elula ngenxa yochungechunge lwezinqamuleli.
Ungashintsha kusuka ku-Android uye kwiWindows futhi ngokuphambene nalokho ngokushesha
Zombili izinhlelo zokusebenza zisebenza kahle. I-Remix OS ilula kakhulu kuneWindows futhi kuyakhombisa lapho usebenza nethebhulethi, uvula izinhlelo zokusebenza, njll. IWindows 10 inzima kepha ukusetshenziswa kwayo kuyadingeka ngokuphelele uma sifuna ukusebenzisa ithebhulethi kube sengathi iyikhompuyutha ephathekayo.
Ikhibhodi yangaphandle, umngane ofanele
Akungabazeki lokhu Ikhibhodi yangaphandle ingumngane ofanelekile wokuthola okuningi ngeChuwi Hi10 Plus. Ngenxa yalokhu okungeziwe, ungasebenzisa ithebhulethi njengekhompyutha ephathekayo ngendlela entofontofo nelula futhi ngaphandle kokushiya iminwe yakho nokubekezela uzama ukubhala imibhalo emide ngesikrini sokuthinta.
Ikhibhodi ihlanganiswe ngokusebenzisa uxhumano kazibuthe lokho kulula ngempela ukuxhuma nokunqamula. Ngaphezu kokusebenza njengekhibhodi yangaphandle, futhi isebenza njengesembozo esivikelayo sethebhulethi, eqinisekisa ukuthi ivikelekile ekuklwebhekeni okungenzeka noma ukuwa okuncane. Ezingeni lezinto zokwakha, igcina ileveli ephezulu efanayo naleyo enikezwa yithebhulethi.
Intengo yayo ingama- € 22 futhi ungayithenga kusuka lapha.
Ukuzimela okuhle kokusetshenziswa
Ngenxa yomthamo webhethri wayo we-8400 mAh, ithebhulethi iyavumela kufika emahoreni ayi-6 wokusebenzisa kakhulu ekusebenzeni okuphezulu sidlala amavidiyo noma sidlala umdlalo. Ukusetshenziswa okujwayelekile kwedivayisi (ukuphequlula i-inthanethi, ukubuka ama-imeyili, njll.) isikhathi sinwetshelwa kumahora we-15-16 Ayikho inkinga.
Isistimu yokusebenza ye-Dual Remix OS & Windows 10
ikhibhodi yangaphandle ehlanganiswe kahle
Inani elikhulu lemali
Impilo enhle yebhethri
Ikhwalithi yesipikha engasebenziseki
Uma ufuna ukubona yonke imininingwane ye-Chuwi Hi10 Plus ngekhibhodi yangaphandle, nansi igalari yezithombe ephelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukubuyekezwa kweChuwi Hi10 Plus ngekhibhodi yangaphandle
Sawubona Miguel, i-athikili enhle, umbuzo onekhibhodi, ithebhulethi ingabamba kuphela ngesixhumi noma kufanele iphumule kwikhava eligoqiwe? Yikho okungenza ngibuyele kuPro
Amaqhinga ama-5 athakazelisayo okuthola okuningi ku-Kindle yakho
IMango ibiza iWallapop ngemakethe yezimpahla zayo ezebiwe